ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ABSDF(NB) 2
You, Kyawnaing Oo, Thin Thin Nyi, အဂ္ဂမဟာ ဒီမိုဖက်တီး and 123 others like this.
Ssi Las ခွပ်ဒေါင်းတွေနေရာအနှံ့ရှိစေရမယ် ရှိနေတယ် ရှိနေဦးမယ် ဆက်ရှိနေမယ်ဟေ့.......
September 5, 2011 at 8:40pm · Like · 1
Zaw Lin forever young our fighting peacocks!!!
September 5, 2011 at 10:16pm · Like · 1
Koko Koko forever!!!!!!!
September 6, 2011 at 1:34am · Like
Ko Pouk ကိုစိုင်း .....
September 7, 2011 at 11:49pm · Like
Ssi Las ခင်ညာ...
September 11, 2011 at 1:26am · Like
Zaw Myo Lwin Please let me share, Sir. Thanks!
January 25, 2012 at 5:56am · Like
ခွန်း ဒီး ယူ လေးစားဂုဏ်ယူလျက်ပါ...မကဒတ(မပ)ကရဲဘော်တို့.....
August 24, 2012 at 6:03am · Like · 3
Zweleo Thiha လေးစားဂုဏ်ယူလျက်ပါ...မကဒတ ကရဲဘော်တို့.....(အားလုံးသို့ )
August 24, 2012 at 7:16am · Like · 6
Nyi Nyi Yu ABSDF မ က ဒ တ ကျောင်းသားတပ်မတော်မှ ရဲဘော် ရဲမေ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို လေးစားတန်ဖိုးထား အစဉ်အမြဲသတိတရ ရှိနေပါကြောင်း ရပ်နီး ရပ်ဝေးမှ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများကို...ကောင်းခြင်းများစွာဖြင့် နုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါ တယ်။..
August 25, 2012 at 3:58pm · Like · 4
Ba Gyi Aung အလှ လား အမြ လား မသိဖူး နောက် ၁ခါအခုလို FB တင်မယ် ဆိုရင် လက်ညှိး ကို မောင်းခလုတိ မှာ မထားနဲ့ 
August 25, 2012 at 6:36pm · Like
Saw Soe Soe အဲဒါ..ဘေးထိုင်ဘုပြောတွေကို ပစ်ဖို့ အသင့်အနေအထားဖြစ်မှာပေါ့
August 30, 2012 at 4:11am · Unlike · 2
Ssi Las ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုမည်းမည်းဖြူဖြူ တိုက်တဲ့လူတွေကတော့တိုက်နေမှာပဲဟေ့
August 30, 2012 at 4:59am · Like · 2
Steven Nyinyi ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသော ရဲဘော် ၊ ရဲမေ များကို အစဉ်လေးစားဦးညွတ်လျက်ပါ ၊ ကျနော်တို့ ကမောသွားလို့ဘေးက ထွက်နားနေတာပါ ၊ သူများတွေလို ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း မတိုက် ဘေးထိုင်ပြီး ဘုတော နေသူများထဲမှာတော့ မပါဘူး အခါအခွင့် သင့်လျင်တစ်ပွဲလောက်တော့ နွဲချင်သေးတယ် ၊ ဒါပေမယ့် မောင်းကျိုးမီးပျက်တွေ နဲ့ တော့ ဆက်မတိုက်ရဲဘူး .............
August 30, 2012 at 3:01pm · Like · 5
Nyi Nyi Yu အသံတိတ်လက်နက်..ဂျင်ဂလိ နဲ့ ပစ်...အဟီ့းးးးးးးးးး
August 31, 2012 at 1:48am · Like
Moe Kyaw Oo ကိုညီညီ နေကောင်းကျန်းမာပါစ။ ကျနော် ဗိုလ်ကျောက် ပါ
September 6, 2012 at 10:41pm · Like · 1
Min Zaw ဗိုလ်ကျောက် လဲ နေကောင်းကျန်းမာပါစေ...
September 7, 2012 at 4:22am · Like
Min Zaw ဇော်မင်း
September 7, 2012 at 4:25am · Like
Paw San မင်းသားကြီးကျန်းမာပါစ
September 15, 2012 at 7:30am · Like
Win Maung မင်းသားကြီး ရေ ...
အဝေးကနေ ကြည့်နေ အားပေးနေရတာ တော်လှန်ရေးဟာ ပျော်စရာလိုလို မြင်နေရပေမယ့် ရှေ့တန်းနယ်မြေမှာ အစစအရာရာဟာ အသက်နဲ့ရင်းရမယ့်ကိစ္စတွေချည့်ပဲ။ သတိထားပါ။ တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ စုစည်းညီညွတ်မှုနဲ့ သေနတ်သံတွေအမြန်ဆုံးစဲပြီး ဆွေးနွေးမှုနဲ့အဖြေရှာနိုင်ပါစေလို့ အားလုံးကောင်းကျိုးအတွက် ဆုတောင်းပါတယ်။
ဓာတ်ပုံတင်မယ်ဆိုရင် ဂရုစိုက်ပါ။ ရန်ဘက်အတွက် လက်ထောက်ချပေးသလို မဖြစ်စေချင်ဘူး။
September 15, 2012 at 8:58am · Unlike · 7
Min Htay ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ ကျေးဇူးတင်တယ်
September 15, 2012 at 9:05am · Like
Shwe Min Thar ရမ်ဘို က ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါ ကိုယ်တို့လူကမှ တကယ်- - - မိုက်သာဟာ ကောင်လေး ဘာတဲ့တုံး
September 15, 2012 at 2:13pm · Like
Ma Bay Dar ဟယ် လူဆိုးဗိုလ်ကြီးတော့
September 15, 2012 at 2:46pm · Like · 1
Ssi Las ကျည်ဖိုးရှုံးတယ် ကြိ်မ်ဒဏ်...
September 16, 2012 at 7:04pm · Like · 2
Nyi Nyi Yu မင်္ဂလာပါ ကိုဗိုလ်ကျောက်ရေ့ ...ကျနော်နေကောင်းပါတယ်။...ကိုဗိုလ်ကျောက်တို့ မိ သားစုကော နေကောင်းကြလား...မတွေ့ ဖြစ်ကြတာကြာပြီနော်....
September 19, 2012 at 6:00am · Like
Moe Kyaw Oo ဟုတ်။ နေကောင်းကျန်းမာပါတယ်။
September 29, 2012 at 12:48am · Like
Wannahlaing Ghre ယူနီဖောင်းဝတ်မှ ချောတဲ့လူက.. ယူနီဖောင်းဝတ်မှပဲ ချောတယ် အကိုရေ
November 2, 2012 at 11:08am · Like
May Sue Pwint ကိုမင်းဌေးကတော့ မနှောင်းအမြန်ရောက်လာအောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့စည်းရုံးနေတယ်နော်..။
November 2, 2012 at 6:30pm · Like · 4
Ma Nwe အစ်မလည်း အထုပ်တွေများပြင်နေပြီလား မသိဘူးးးးးး
November 2, 2012 at 7:30pm · Like · 1
Ko Moe မပ က ရဲဘော်များ အားလုံးကို သတိတရ လေးစားစွာ ဖြင့့်ှှု့
November 6, 2012 at 4:21pm via mobile · Like
Thet Hmu ကလေးစစ်သားပြသနာကသိပ်မသေးဘူးနော်၊မှတ်ပုံတင်တွေလဲရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့...
Htay Aung အင်အားမမျှပေမယ့် စွန့် စွန့် စားစားတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကို လေးစားပါတယ်ဗျာ။
January5at 7:32am · Like · 2
Jing Hpaw အသက်ပေးဆပ်သွားသောခွပ်ဒေါင်းများနင့်KIA myutsaw share shagan ni အားလုံးကိုအစဉ်လေးစားဂုဏ်ယူလျက်ပါ၊ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေသော ဒေါင်းစစ်သည်များနင့်Myutsaw share shagan များ အားလုံးကို ရောက်သည့်နေရာမှ အလေးပြုပါသည်
January5at 7:40am · Like · 1
Munglai Hkyet အလေးပြုပါသည်
January5at 7:50am · Like
Khin Mgoo very sorry for the hero of ABSDF and God must be save you all.We salute you all.
January5at 7:57am · Edited · Like
Brang Di လေးစားပါတယ်ရဲဘော်။
January5at 7:57am · Like
Yee Win ကောင်းရာ ဘုံဘ၀ကို ရရှိနိုင်ပါစေ။
January5at 7:58am · Like
Dpns-usa Branch ဦးညွှတ်အလေးပြုပါသည်။
January5at 8:43am · Like
Daw Molly ရဲသော်မသေ..သေသော်ငရဲမလားပါ..ဂုဏ်ယူပါတယ်ရဲဘော်...
January5at 8:53am · Like
Jar Gyi ရဲဘော်-ငါတို့ဟာ-ရေကြည်ရာ၊မြက်နုရာကိုရှာဖွေနေသူမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့သိပါစေ။ရဲဘော်-သင်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့တော်လှန်ရေးသမားဖြစ်တယ်။ရဲဘော်ဟာဒီတိုက်ပွဲမှာ-စစ်သည်(၃)သိန်းကျော်ရှိတဲ့။လက်နက်အင်အားအမြောက်အများ၇ှိတဲ့ယုတ်မာတဲ့စစ်တပ်ကိုသူရသတ္တိရှိစွာနဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ရဲတာကိုက-ငါတို့၏မကဒတဂုဏ်၊ခွပ်ဒေါင်းဂုဏ်ကိုဆောင်တာပဲ။ရဲဘော်ဟာမြင့်မြတ်စွာနဲ့ကျဆုံးရတာကိုငါတို့ဂုဏ်ယူတယ်။အလေးပြုတယ်။အဲဒီနေရာ(တော်လှန်နေရာ)မှာငါတို့အတူတကွ-ပွတ်ချွန်းတွေလုသောက်ကြတယ်။အဲဒီနေရာမှာငါတို့အတူကတုတ်ကျင်းတွေတူးပြီးရန်သူကိုစောင့်နေတယ်။ငါတို့ရဲ့ဂုဏ်အထူးထူးကိုမနာလိုသူတွေက-နေရာပေါင်းစုံကနေဂုဏ်သရေဖျက်ဘို့ကြိုးစားနေကြရဲ့။သေခြာတာတခုက-ငါတို့ဟာ-ပင်လယ်ဓါးပြတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါ့ကြောင့်-ရဲဘော်-သင်ဟာဘယ်တော့မှမသေ-ခွပ်ဒေါင်းအမ္မတ္တေဖြစ်တယ်။ရဲဘော်-သင်ဟာ-ဘယ်တော့မှမသေးရ-ရဲဘော်ဟာ-ငါတို့နုလုံးသားမှာထာဝရသူရဲကောင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုတာ-ရဲဘော်တမလွန်ကနေစွဲမြဲစွာယုံကြည်ပါ။ဒါဟာငါ့ရဲ့သစ္စာစကားပါ။ရဲဘော်ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။(ဂျာကြီး)
January5at 9:15am · Like · 2
Htay Thanhtwaykyu ကောင်းရာသုဂတိရောက်ပါစေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
January5at 4:14pm · Like
Kyaw Kyaw လဂျားယန်တိုက်ပွဲ ထိုးစစ်မှာ ကျနော်နဲ့ရှေ့ဆုံးက ပါလာတဲ့ ရဲဘော်လေးပါ..
January5at 6:39pm · Like · 1
Sanay Htun အလေးပြုလိုက်ပါတယ် ရဲဘော်။ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။
January5at 7:50pm · Like
Loi Kaw အစဉ်လေးပြုလျှက်ပါ ..
January5at 9:32pm · Like · 1
Myo Min Soeွှအာဏာရှင် စနစ်ဆိုးမကုန်ဆုံးသရွှေ့
January5at 11:38pm · Like · 2
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 4:53 PM